Budata Galactic Colonies APK maka Android
Budata Galactic Colonies
Budata Galactic Colonies,
Galactic Colonies bụ egwuregwu gbasara ịgagharị ohere na iwulite ngalaba. Nyochaa usoro mbara igwe na-emepụta usoro yana ọtụtụ puku mbara ala. Obodo ọ bụla na-amalite obere.
Malite site na ịnye ndị nwe ụlọ ebe obibi na nri tupu iji akụ sitere na mbara ụwa. Mee ụlọ mmepụta ihe na imepụta ngwaahịa ọgbara ọhụrụ iji bulie mpaghara gị. Nyochaa mbara ala okpomọkụ, ọzara na ice mbara ala ma nyere obodo gị aka ịlanarị na ụwa ọjọọ.
Alaeze gị ga-anọgide na-emepụta ihe ọ bụla ọbụlagodi na ị naghị egwu egwu. Ọrụ gị dị ka eze bụ ijikwa ihe niile, mepee usoro ahụ ma nye iwu. Nwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa site na ịpị aka ngwa ngwa, mana ịkwesighi. Ihe niile dị nógbè gị na-aga nihu na oke ha.
Budata Mpaghara Galactic nefu ma bido ịgagharị ụyọkọ kpakpando ọhụrụ.
Galactic Colonies Ụdịdị